Retort autoclave, Retort sterilizer, Jacketed ketera - Shenlong
Hot Kutengesa Steam Kupisa Mvura Kudzosera Sterilizer Auto ...
High Quality Automatic Steam Planetary Stirring ...
Zhucheng Shenlong Machinery Fekitori, yakagadzwa muna2004, ndeimwe yevagadziri vakuru vekupisa kwakanyanya uye kwakanyanya kudzvinyirira uye jekete rakapfeka kuChina. Isu tinonyanya kuburitsa otomatiki emvura yekunyudza kudzora, mvura yekupusha / inokanganisa kudzora, kudzora kudzora, kudzosera mutyairi, magetsi uye kupisa kwemhepo, kudzora mafuta, kudzora marasha uye jekete rakapfekwa.
Zhucheng Shenlong Machinery Chinhu
Isu tinonyanya kuburitsa otomatiki emvura yekunyudza kudzora, mvura yekupusha / inokanganisa kudzora, kudzora kudzora, kudzosera mutyairi, magetsi uye kupisa kwemhepo, kudzora mafuta, kudzora marasha uye jekete rakapfekwa.
Sterilization muhari yekuita maitiro
Mukuita kwe sterilization, kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kune yekutanga kufema, uyezve pedza chiutsi, kuitira kuti kupisa kwemhepo. Inogona zvakare kuverengerwa yega yega 15-20 maminetsi kusimudzira kupisa exch ...
Sterilization muhari yekuita maitiro uye matanho
Pakutanga kuona, iyo yekuchenesa poto inofungidzirwa kunge yakajairwa hari. Muchokwadi, hazvisi. Iyo yekudzivirira hari chinhu chikuru-chakakura mbichana chiridzwa, uye haisi yedu yakajairika imba hari ....